Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ryanair's Bullish Summer 2022 Plans Akwụ ụgwọ Dividends?
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Ireland • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
'Sgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọnụ ala nke Europe na-ahụ oge ọkọchị 2022 ka oge ya na-enwu, ma na-akwadobe.
Ryanair etinyela nzo ya na nloghachi ihe achọrọ site na ịmalite nnukwu mbanye maka ndị ọkwọ ụgbọ ala 2,000 n'afọ atọ na-esote.
Ryanair ga-ewere nnyefe nke 50 nke ọhụụ 200+ ọhụụ site na oge ọkọchị 2022.
Site na ịchọrọ ịchọrọ maka njem na-arị elu, Ryanair nwere ike ịbụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha mma iji nweta ọchịchọ.
Ryanair elekwasịla anya n'oge ọkọchị siri ike nke 2022. Na-echere nnyefe nke ụgbọ elu ọhụrụ na nnukwu mbanye n'ọrụ, n'afọ na-esote ga-akwụ ụgwọ maka ụgbọ elu ahụ, n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị njem na-enwe mmefu mmefu ego njem.
'Sgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọnụ ala nke Europe na-ahụ oge ọkọchị 2022 ka oge ya na-enwu, ma na-akwadobe. Ryanair etinyela nzo ya na nloghachi ihe a chọrọ site na ịmalite ịmalite mbanye maka ndị ọkwọ ụgbọ ala 2,000 n'ime afọ atọ na-esote. Ọzọkwa, Ryanair ga-ebufe 50 nke usoro ụgbọ elu 200+ ọhụrụ ya n'oge ọkọchị 2022, ka ọ na-akwadebe maka oge post-COVID kachasị na ya ruo oge. Site n'inwe agụụ maka njem na-arị elu ka mgbochi na-amalite ịdị mfe na Europe dum, Ryanair nwere ike ịbụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kachasị mma iji nweta ihe ọ chọrọ, nke a nwekwara ike ịmị mkpụrụ maka onye na-ebu ya, ọkachasị na ụgbọ elu ọhụrụ ya.
The ọhụrụ Boeing 737-8200 ụgbọ elu ga-enye oche asatọ ọzọ iji tụnyere ọdụ ụgbọ elu ya dị ugbu a nke 189, ebe ịbelata mmanụ ọkụ site na 16% kwa oche ma belata mkpọtụ / CO2 anwuru, nke kwesịrị inye aka belata ọnụ ahịa n'ihu.
Ryanair ọhụrụ na-agbanwe ụgbọ elu ụgbọ elu yiri ka ọ ga-akwọ ụgbọ ala ya dị ala ọnụ ala. Mbelata mmanụ ọkụ na-ere maka oche ọ bụla ga-ebelata mmefu na mmanụ, si otú a na-enye ụgbọelu nnukwu ego ịchekwa. Ọ bụrụ na ị gafere ndị njem, Ryanair ga-anọ n'ọnọdụ siri ike iji belata ọnụahịa tiketi, bụrụ onye na-asọ mpi karị, ma zọpụ ụkwụ ndị ọzọ. Aircraftgbọ elu ọhụrụ Ryanair, tinyere ọkwa dị elu nke atụmanya a na-atụ anya ya, nwere ike ịhụ onye ọrụ ụgbọelu ahụ mma na gburugburu post-COVID, na-adọta ọtụtụ ndị njem na-emefu ego nke nwere ike ị kwupụtala iguzosi ike n'ihe ha n'ebe ọzọ tupu ọrịa ahụ.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mmetụta ọrịa ahụ nwere na mmefu ego nke ndị njem na 11% nke ndị zaghachirinụ na-ekwupụta mbelata mmefu ego njem mgbe emesịrị COVID.
Na ego na-ebelata, ndị njem na-ahọrọbu ndị na-arụrụ ha ọrụ ga-agbanwe na obere ego maka obere oge. Ryanair ga-anọ n'ọnọdụ dị mma ma e were ya tụnyere ndị ọzọ, tụmadị iwebata ụgbọ elu ọhụrụ ya na ego ọ ga-ewe iji kpalite mmasi.
Ọzọkwa, nghoputa ọzọ gosipụtara ụgwọ dị ka ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ akara ụgbọelu. Ihe karịrị ọkara (52%) nke ndị zaghachiri họpụtara ọnụahịa / uru dị ka ihe kachasị - nke na-eme nke ọma maka Ryanair.
Ọnọdụ asọmpi ụgbọ elu ụgbọ elu ahụ, ụgwọ ụgbọ ala, na netwọkụ Europe na-ebuwanye ibu ga-akwụ ụgwọ ma nwee ike ịhụ ụgbọ elu ahụ dịka onye na-ebu nhọrọ maka njem post-COVID. Site na ịkwụ ụgwọ maka ihe ịchọrọ ụdị, Ryanair ga-adọrọ mmasị ndị na-achọ ọrụ kachasị mkpa. Ọ nwere ike ịmacha ndị egwuregwu na-eme mkpọtụ, yana usoro ya siri ike ga-eme ka ọ merie ndị njem iji nyere ya aka ịpụ n'ike site na ọrịa ahụ.